भ्रष्टाचारको झाडीमा प्रधानमन्त्री ओलीको आगो « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 25 February, 2020 10:20 am
सदाचारले समाजलाई सभ्य बनाउँछ । भ्रष्टाचारले सभ्य र समृद्ध समाजलाई पनि अधो गतिमा लैजान्छ । स्थापित विधिविधान,समाजिक मूल्यमान्यता सांस्कृतिक मर्यादा तथा परापूर्वकालदेखि चलिआएको परम्परा विरुद्ध हुने कृयाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । लोकोपवाद पनि भ्रष्टाचार हो । वैचारिक विचलन पनि भ्रष्टाचार हो । फलानाको बाटोमा हिडेको यस्तो वादमा प्रतिबद्ध भएको भनिए पनि त्यसमा स्थित भई चल्नु नसक्नु पनि भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारमाथि लगातार प्रहार गरिरहनु चेतनशील व्यक्ति र समाजको धर्म हो । राज्यको राजश्वमा अनुचित हात हाल्नु झन ठूलो भ्रष्टाचार हो । जनविरोधी कार्य हो । राज्यसत्तामा रहेका पदाधिकारीले यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई समयमै दण्ड दिनु नै राज्यकला हो । कल्याणकारी राज्य सञ्चालनको संकेत हो ।
भ्रष्टाचार नगर्न र भएमा रोक्न पुर्खाहरुले विभिन्न सन्देश दिएका छन् । हक नलाग्ने धनदौलथमा हात नहाल्नू, अन्यायले उपार्जन गरेको धन १० वर्षसम्म रहने र ११ वर्षदेखि घट्न थालेर १६ वर्षमा समूल नष्ट हुने विचारक चाणक्यले उल्लेख गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले घूस लिन्या र दिन्या दुवै देशका महाशतुर हुन् यिनको ता धनजीव गरिलिया पनि पाप छैन भनेर घूस लिने मात्र होइन दिने पनि भ्रष्टाचारी नै ठहर गरेका छन् । हालै नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका छिमेकी राष्ट्र जनगणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चीन फिङले पनि नेपाली नेतृत्वसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु नै जनसेवा हुने बताउनुभएको थियो देश समृद्ध बनाउन आर्थिक आर्जन मात्र गरेर हुँदैन भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भन्नेमा वर्तमान सरकार पनि संकल्पकृत रहेको विभिन्न घटनाले सिद्ध गरेको छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारमा मुछिएका धेरैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जगजाहेर छ । ललितानिवासको घटना होओस् वा सुरक्षण मुद्रणमा कमिशनको खेल होओस् ओली सरकारको आँखा पुगेकै छ । सुनकाण्ड। सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन हडप्ने माफियाका साथै विभिन्न आयोजनामा भएका भ्रष्टाचार, कार्यालयमा काम गर्दा घूस माग्ने भ्रष्टाचारमा समेत सरकारको नजर गएकै छ । कारबाही भएकै छ । साना माछा मात्र समातिएको भन्ने टिप्पणीकर्ता पनि अहिले जिल खाएका छन् सरकारी साहसप्रति दुनिया सकारात्मक छ
भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छेको परिक्रमा गर्ने केही स्वार्थी समूहले अख्तियारलाई समेत तानेर अनेक रोइलो सुनाए,अलाप गाए तर सरकार आफ्नो सुरमा सौर्यका साथ अघि बढिरहेको छ । धनको भ्रष्टाचार मात्र होइन मानमनितोको भाषा बिगार्ने लेखनमाथि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शुद्धिका शब्द बोलेपछि केही मानिस छट्पटिएका छन् । नेपाली भाषाको परम्परा र मौलिकता मुन्ट्याउने गरी आदरार्थी संरचना स्वाहा पार्ने स्वनामधन्य लेखक पनि आज रन्थनिएका छन् । शव्द र विचारको विचलन झन ठूलो भ्रष्टाचार हो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दृष्टिप्रति केही सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक पनि उहाँप्रति कटाक्षवाक्य छोड्दै छन् । उनीहरु देशको हितमा लेख्दैछन् किन कसको हित रक्षा गर्दैछन् जनप्रश्न उठेको छ ।
नेपालको नवीन राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सबैजसो सरकार पूर्णकालीन कार्यावधि पार गर्न नपाई ढलेको तीतो यथार्थ छ । वर्तमान सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको भोलिपल्टै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटो खुल्यो भन्ने समाचारले यस देशलाई स्थिरता दिन्छ कि अस्थिरता ? संविधानको आशय पनि स्थिर सरकारकै लागि हो नत्र त २ वर्षे कार्यकाल भन्ने लेखे हुन्थ्यो । देशका जनता मुलुकको राज्यव्यवस्था निश्चित होस् । सरकार स्थिर होस् भन्ने चाहन्छन् तर अस्थिरताको पक्षपोषण गरेर कसको हित हुन्छ ? नेपाली जनता कहिलेसम्म अस्थिरतामा रहने ? पुस्तौं पुस्ता हामी आपसमा लडेर लडमुखा बनाउनेको योजनामा किन रमाउने ? त्यो योजनाले आज केही आर्जन देला कसैलाई आनन्दै होला तर राष्ट्रको गति अलमल हुनेछ । जनताका सन्तानले विदेशीभूमिमा गई दुःख पाएर देश पठाएको विप्रेषण बर्बाद भयो भने सपूतको आँशु बग्ला । यही राज्यले दुई अक्षर पढाएर आज विद्वानमा दरिएका, लेखक कहलिएकाले सोच्ने समय भएको छ । भ्रष्टताको बाटो छोडेर एकताको आँगनमा आउने बेला भएको छ ।
सज्जनहरुले त भ्रष्टाचार रोक्ने सरकारी गति अझ तेज बनोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । सदाचारमा बसेर देशसेवा गर्नेहरु पुरस्कृत होऊन् । योग्यले अवसर पाऊन् । सदाशय राखेर मुलुक र जनताका लागि काम गर्ने जनशक्ति देशमै रहून् र सरकारले अघि सारेको कदममा सबैले शिर ठाडो पारी सहयोग गरुन् । काम गर्न खोज्ने कदम कहिल्यै अवरुद्ध नहोस् । राष्ट्रोत्थानका लागि दृढताकासाथ डटेको मन सधैं सफल रहोस् । भ्रष्टाचार र अस्थिरताको अन्त्य होस् ।